Esi gbanwee paswọọdụ nke akaụntụ Gmail gị Akụkọ akụrụngwa
Edere Esteban | | General, Nkuzi
The Gmail paswọọdụ bụ nke dị oké mkpa. Na mgbakwunye na igbochi ndị ọzọ ịnweta ozi anyị, ọ na-egbochi ịnweta akaụntụ Google anyị site na ya. Ya mere, ọ dị oké mkpa na anyị nwere paswọọdụ echekwara na akaụntụ anyị, nke mere na ọ na-esiri onye ọzọ ike ịnweta ya.
Creatmepụta okwuntughe siri ike abụghị ihe mgbagwoju anya, mana ọ dị mkpa ka anyị mee ya. Ebe ọ bụ na n'ọtụtụ oge anyị na-ejikarị otu okwuntughe na ọtụtụ peeji n'otu oge, ihe nwere ike ime ka anyị bụrụ ndị na-adịghị ike. Ya mere gbanwee okwuntughe Gmail ọ bụ ezigbo nhọrọ ịtụle. N'ebe a, anyị na-egosi gị otu anyị nwere ike isi mee ya. Ka i wee chebe akaụntụ email gị.
Enwere ọtụtụ ọnọdụ ebe anyị nwere ike ịgbanwe okwuntughe anyị na Gmail. O nwere ike ịbụ ihe ị kpebiri, n'ihi na ịchọrọ ịbawanye nchekwa nke akaụntụ gị. Mana o nwekwara ike ime na ịchefuola paswọọdụ gị, yabụ na usoro mgbake ị ga-eji nke ọhụrụ dochie anya ya. Anyị na-akọwa ọnọdụ abụọ dị n'okpuru. Ọzọkwa ụzọ anyị nwere ike isi mepụta okwuntughe siri ike.
1 Gbanwee okwuntughe Gmail site na nzọụkwụ
2 Ọ bụrụ n’ichefuola paswọọdụ gị - Naghachi paswọọdụ
3 Esi eweputa okwuntughe siri ike
Gbanwee okwuntughe Gmail site na nzọụkwụ
Methodzọ mbụ bụ ihe kachasị mma, ma ọ bụrụ na oge abịa mgbe ịchọrọ gbanwee okwuntughe iji meziwanye nchebe na akaụntụ Gmail gị. Usoro iji soro n'okwu a adịchaghị mgbagwoju anya. Nke mbụ, dịka ị nwere ike ịtụ anya, ị ga-abanye na akaụntụ anyị. Yabụ, anyị ga - eme ka nchedo gị ka mma, ịmara kwa ngwa dị iche iche nwere ohere dị mkpa.
Ozugbo anyị banyere n'ime, anyị ga-pịa na bọtịnụ cogwheel n’elu aka nri nke ihuenyo ahụ. Aka nri n’elu ozi nile anyị nwere n’ime igbe mbata anyị. Site na ịpị bọtịnụ usoro nhọrọ ga-apụta. Ga-ahụ na otu n'ime ha bụ nhazi ahụ, nke anyị ga-pịa.
Ntọala akaụntụ Gmail wee mepee na ihuenyo. N'okwu a, anyị ga-eleba anya na ngalaba ndị dị n'elu. Enwere ngalaba dịka General, Labels, Natara, wdg. N'ime ngalaba ndị a anyị hụrụ, nke masịrị anyị na nke a ọ bụ Akaụntụ na mbubata.
Anyị abanyezie ngalaba a ma anyị ga-ahụrịrị akụkụ mbụ nke gosipụtara na ihuenyo ahụ, a na-akpọ Gbanwee ntọala akaụntụ. N'ebe ahụ, nhọrọ mbụ e gosiri anyị bụ gbanwee okwuntughe Gmail, na akwụkwọ ozi na-acha anụnụ anụnụ. Anyị na-pịa na nke a nhọrọ, gaba gaba gbanwee kwuru okwuntughe. A ga-ebu ụzọ gwa gị ka ịbanye na paswọọdụ gị ugbu a na ikpo okwu ozi.
A ga-ewega gị na ihuenyo ebe ị nwere naanị tinye okwuntughe ohuru gi maka Gmail. Egosiputara ihe ndi o choro ka ha mee dika ihe doro anya. Ebe ọ bụ na ọ ga-enwerịrị opekata mpe akara asatọ. Ozugbo anyị nwere paswọọdụ, anyị na-emeghachi ya ọzọ na ala nke ihuenyo na anyị na-enye gị ka ị gbanwee okwuntughe, bọtịnụ na-acha anụnụ anụnụ na ala nke ihuenyo ahụ.
Site na usoro ndị a, ị gbanweela Gmail paswọọdụ gị. Ọ bụghị ihe zuru oke, ọ dịkwa mma ịme ya kwa oge, ọ bụrụ na ị nwere enyo gbasara nchekwa ma ọ bụ chee na okwuntughe esighi ike. Ebe ọ bụ na usoro ahụ n'onwe ya adịghị mgbagwoju anya iji mepụta.
Ọ bụrụ n’ichefuola paswọọdụ gị - Naghachi paswọọdụ
Otu ọnọdụ nwere ike ịda mgbe ụfọdụ bụ na ị chefuru paswọọdụ nke akaụntụ Gmail gị. O di nwute, oru ozi nwere usoro anyi nwere ike inweta uzo ozo ma ya mere anyi agha igbanwe okwuntughe uzo di mfe. Na ihuenyo nbanye, mgbe anyị na-amaghị paswọọdụ, anyị na-ele anya na ederede dị n'okpuru igbe paswọọdụ.
Ọ bụ ederede na-ekwu "Chefuru okwuntughe gị?". Anyị ga-pịa ya, nke ga-akpọrọ anyị na ihuenyo iji malite usoro mgbake a, ka anyị wee nwee ike ịnweta akaụntụ ahụ ọzọ. Ihe mbụ ọ ga - agwa gị ka ị mee bụ itinye paswọọdụ ikpeazụ ị chetara iji na Gmail. Ọ bụrụ n’ichetaghị nke ọ bụla n’ime ha, pịa na nhọrọ “nwaa ụzọ ọzọ” n’ala.
Ebe a, a ga-enye gị ohere nke zipu koodu nkwenye na ekwentị gị. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-abanye koodu na Gmail iji nwetaghachi akaụntụ ahụ. Ọ bụ nhọrọ dị nchebe, ebe ọ bụ naanị anyị nwere ike ịnweta koodu a. Yabụ ọ bụrụ na onye ọzọ na-anwa ịbanye, ozi ahụ ga-erute anyị. Gmail na-enye gị ohere ịnweta ozi ma ọ bụ oku, yabụ ị nwere ike ịhọrọ nhọrọ masịrị gị. Ozi dị mfe.
Mgbe inwetara ozi ahụ wee dee koodu ahụ, ị ​​ga-enweta ihuenyo ị ga-abanye na ya mepụta okwuntughe ohuru maka Gmail. Ọzọ, ị ghaghị ijide n'aka na ọ bụ paswọọdụ siri ike. Ya mere, a na-arịọ ya ka o nwee opekata mpe mkpụrụ edemede asatọ. Ya mere, mgbe ị mepụtara ya ma degharịa ya, ị ga-enwetaghachila akaụntụ email gị wee gbanwee paswọọdụ gị n'otu oge ahụ.
Esi eweputa okwuntughe siri ike
Mara otu esi emepụta okwuntughe siri ike bụ ihe dị mkpa nye ndị ọrụ niile. Ọbụghị naanị iji ya na akaụntụ Gmail gị, kamakwa n'ọtụtụ akaụntụ ndị ọzọ. Mgbe ị na-eke paswọọdụ, enwere ọtụtụ ntuziaka ndị ọkachamara n'ihe gbasara nchekwa na-atụ aro iburu n'uche ka ọ dị irè. Isi akụkụ bụ:
Ọ ka mma na o nwere opekata mpe mkpụrụ edemede iri na abụọ
Emela mgbanwe doro anya dịka idochi mkpụrụedemede E maka ọnụọgụ 3
Jiri nnukwu mkpụrụedemede, obere mkpụrụedemede, nọmba na akara
Ejila ihe dị mfe isonyere onye ọrụ ahụ (ụbọchị ọmụmụ, aha ezinụlọ ma ọ bụ ezinụlọ, anụ ụlọ, wdg)
Adighi ede edemede asusu
Enwere ọtụtụ akụkụ ị ga-eburu n'uche, mana nke bụ eziokwu bụ na e nwere aghụghọ dị mfe nke enwere ike iji mepụta okwuntughe siri ike, maka Gmail ma ọ bụ ikpo okwu ọzọ. Ikwesiri iwere okwu ichoro iji, na anyị ga-ewebata ụfọdụ akara na nọmba na otu. Nke a, na mgbakwunye na ịdị mfe, na-abawanye nchekwa. Nke na-ebelata ohere nke hacking ma ọ bụ ohi.
Dịka ọmụmaatụ, paswọọdụ bụ paswọọdụ nkịtị maka ọtụtụ ndị ọrụ. Mana ọ bụ okwuntughe na-esighi ike, na aghụghọ nke anyị gosịpụtara gị, anyị nwere ike ịme ka ọ nwekwuo nchebe, nke mere na ọ ghọrọ: $ P4s5W0rd% *. Yabụ, na-enweghị ogologo oge, okwuntughe kariri ihe kariri ma di nchebe. N'ihe banyere Spain, ị nwere ike iji Ñ na okwuntughe gị dị ka ụzọ isi melite nchebe ha.
Otu okwuntughe kachasị ụwa niile bụ "123456". Ọ bụ ihe na-ahụkarị, mana adịghị ike ma dị ize ndụ iji na Gmail. Mana ọ bụrụ na anyị megharịa usoro gara aga wee webata ụfọdụ akara na leta Ñ, ihe na-agbanwe nke ukwuu. N'ihi na paswọọdụ na-aghọ: 1% 2 * 3Ñ4 $ 56. Ka odi mfe mgbe niile. Yabụ, iji usoro ndị a dị mfe, ị nwere ike ịmepụta okwuntughe nwere nchekwa maka akaụntụ email gị ma ọ bụ akaụntụ ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkuzi » Esi gbanwee okwuntughe Gmail gị
Santọ sanchez dijo
Ọ bụ eziokwu
Zaghachi Dulce Sanchez
Xiaomi M365 skuuta nyochaa
Smart Force Mkpa aqua site Rowenta, anyị nyochaa nke a robot agụụ Cleaner na scrubs